Dhulbahante - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Beesha Darawiish)
Majeerteen, Dishiishe, Warsangali iyo Harti iyo Daarood
Maqaal kaan malahan xigasho ama xog xaqiijin ah. Fadlan gacan ka geeso hagaajinta maqaalkaan in aad ku soo darto xigashooyin lagu kalsoonaan karo. Qoraalada aan laheen xog caddayn ah waxaa dhici karto in laga saaro meeshaan.
Dhulbante waa qabiil kamida qabaailka Soomaaliyeed ee dega waqooyiga iyo galbeedka Soomaaliya, Waxayna kasoo jeedaan beel waynta Daarood, dhulbahante waxa uu dagaa gobolada Sool, Sanaag, Cayn iyo weliba kililka shanaad ee itoobiya sida doollo iyo wardheer. Dhulbahante waxa uu kamid yahay beelaha waawayn ee aragtida ka dhiibta arrimaha Soomaaliya ee saamaynta tooska ah ku leh siyaasadda, iyagoo halgankii xornimo doonka gacan wayn kagaystay. Dhulbahante oo loogu yeedho daraawiish sababtuna ay tahay waxay ahaayee dadkii aas aasay oo hir galiyey dawladii islaamiga ahyd oo kadhisnayd gobolada SSC taasoo ay soomalida ugu yeeraan daraawiishta .
5 Xogta Ttixraacaha
6 Dabaacaha gabay
7 Maqaalaha aqoonyaasha
Daarood waa beel ka mid ah beelaha Soomaalida kuwaasi oo degan Geeska Afrika. Beesha Daarood waxaay degtaa wadanka Soomaaliya, wadanka Itoobiya iyo deegaano ka tirsan wadanka Kiinya. Guud ahaan, beesha Daarood waxaa ka farcama reero badan oo ka mid yihiin:
Ciyaaraha Dhulbahante waxaa ka mid ah Jandheer.
Shuruudaha Dhulbahante ama Beesha Darawiish waxaa ka mid ah:
Shuruudaha bandhigta Ismail Mire
Shuruudaha qanuunka Sayid Mah
Shuruudaha guud ee wadamada Soomaaliyeed
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/5/1926/files/2016/02/diiwaanka-gabayadii-sayid-maxamed-cabdulle-xasan-2015_07_08-16_13_50-UTC-1f1kdxm.pdf gabayada sayyidka
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WWOTQrZQnfoJ:https://idoc.pub/documents/diiwaanka-gabayadii-sayid-maxamed-cabdulle-xasan-20150708-161350-utc-1f1kdxm-on23j9y2v3l0+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=uk gabayada sayyidka
https://arcadia.sba.uniroma3.it/bitstream/2307/5384/1/Proclaim%20to%20the%20people_Five%20poems%20by%20Sayyid%20Mu%E1%B8%A5ammad%20%27Abd%20All%C4%81h%20%E1%B8%A4asan%20of%20Somalia.pdf gabay translation english
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yHAjUZmwU7YJ:www.somalinet.com/forums/viewtopic.php%3Ft%3D221458%26start%3D90+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=uk Jilib iyo Qabiil
https://barkhadawcali.files.wordpress.com/2016/09/dabkuu-shiday-darwiishkii_daraama_lavorato1.pdf Ragxun, Indhabadan, Shiikhyaale, Miinanle, Dharbash
https://www.docdroid.net/EDBBrGZ/ismail-mire-translation.pdf#page=11 Ismail Mire - Ingiriis
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhulbahante&oldid=201662"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2020, marka ee eheed 00:38.